Hanova ny fiteny sy ny sainam-peo eo amin'ny macOS
Ireo mpampiasa vao nahazo ny macOS dia manana fanontaniana vitsivitsy mikasika ny fampiasana azy, indrindra raha azo atao ny miasa amin'ny Windows OS aloha. Ny iray amin'ireo asa voalohany entin'ny mpangataka dia ny manova ny fiteny ao amin'ny rafitra opera apel.
Mpikaroka ho an'ny macOS
Tahaka ny rafitra fiarovana Windows, izay ahitana fitaovana iray ahafahana miara-miasa amin'ny rakitra, dia ny macOS ihany koa no omena azy hatramin'ny voalohany. Marina fa voafetra ny fahafahan'ireo archiver ao amin'ny tranokala - Ny Utilisie Archive ampiasaina ao amin'ny OS appel dia mamela anao hiasa amin'ny ZIP sy ny GZIP (GZ).
Fomba hanombohana ny Task Manager amin'ny macOS
Ireo mpampiasa izay vao "nifindra monina" avy amin'ny Windows ka hatramin'ny macOS dia nangataka fanontaniana marobe ary miezaka ny mitady namana eo amin'ity rafitra fiasa ity, fandaharan'asa sy fitaovana ilaina amin'ny asany. Ny iray amin'ireo dia ny Task Manager, ary anio dia hanambara aminao ny fomba hanokafana azy amin'ny ordinatera sy solosaina Apple.
Mpanjifa tsara indrindra ho an'ny macOS
Ny rafitra fiasan-desktop an'ny Apple, na dia eo aza ny fahatongavany sy ny fiarovana azy, dia mbola manome ny mpampiasa azy ny fahafahana miasa amin'ny rakitra an-tsarimihetsika. Toy ny ao amin'ny Windows, ho an'ireny tanjona ireny, ny MACOS dia mitaky programa manokana - mpanjifa maoderina. Hiresaka momba ireo solontena tsara indrindra amin'ity sehatra ity isika androany.
Antivirus ho an'i MacOS
Ny teknolojia an'i Apple dia malaza eran'izao tontolo izao ary ankehitriny dia mpisera an-tapitrisany no mampiasa amin'ny solosaina amin'ny MacOS. Androany dia tsy hanova ny fahasamihafana eo amin'ity rafitra fiasa sy Windows ity isika, fa aleo miresaka momba ny rindrambaiko izay miantoka ny fiarovana amin'ny fiasana amin'ny PC. Studios mandray anjara amin'ny famokarana antibiotika, mamokatra azy ireo tsy eo ambany Windows ihany, fa koa manao fivoriambe ho an'ny mpampiasa azy avy amin'ny Apple.
Masinina virtoaly ho an'ny macOS
MacOS dia rafitra fiasa tsara, izay, toy ny Windows "fifaninanana" na Linux misokatra, dia manana tombony sy tsy fahampiana. Ny iray amin'ireo rafitra ireo dia sarotra ny mifangaro amin'ny iray hafa, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa. Saingy inona no hatao raha ilaina amin'ny fampiasana rafitra iray ny fampiasana ireo fahafahana sy fitaovana izay ao amin'ny tobin'ny "fahavalo" ihany?
https://termotools.com mg.termotools.com © MacOS 2019